ကိုကိုတို့ရဲ့ အင်္ဂါကို လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၁၀) ချက်… (ဒါတွေ လုပ်မိရင်တော့ ကိုကိုတို့ တစ်သက်စာကံဆိုးပြီ) - APANNPYAY
Home / ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ / ဗဟုသုတအစုံ / ကိုကိုတို့ရဲ့ အင်္ဂါကို လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၁၀) ချက်… (ဒါတွေ လုပ်မိရင်တော့ ကိုကိုတို့ တစ်သက်စာကံဆိုးပြီ)
ကိုကိုတို့ရဲ့ အင်္ဂါကို လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၁၀) ချက်… (ဒါတွေ လုပ်မိရင်တော့ ကိုကိုတို့ တစ်သက်စာကံဆိုးပြီ)
Apann Pyay 9:19 PM ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ , ဗဟုသုတအစုံ Edit
1. ထောင်နေချိန်မှာ မချိုးပါနဲ့
သင့်အဂါင်္ မာကြောထောင်မတ်နေချိန်မှာ ငြိမ်သွားစေချင်လို့ဆိုပြီး ချိုးတာမျိုး မလုပ်မိပါစေနဲ့ ၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သင်ချိုးတာဟာ ၃၀ ဒီဂရီထက် ပိုသွားခဲ့ရင် အဂါင်္ကျိုးသွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေပါ။
သင့်အဂါင်္ရဲ. အရေပြားတွေဟာ ထိလွယ်ရှလွယ်ပါ ၊ ဒါကို ကိုက်တာမျိုး လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ် ၊ အရေပြား ပေါက်ပြဲတာမျိုး ၊ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
3. ရိုက်နှက်ခြင်းမျိုး မလုပ်ပါနှင့်
ဘာအကြောင်းနဲ့မှ ဒီနေရာကို ထိုးတာကန်ကြောက်တာ ရိုက်နှက်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့ ၊ အခန့်မသင့်ရင် သေသည်ထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
4. သန့်ရှင်းေ၇း လုပ်ပေးပါ
ချစ်တင်းနှောပြီးရင်ဖြစ်စေ ၊ တစ်ကိုယ်ရေအာသာဖြေပြီးရင်ဖြစ်စေ သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ပေးရပါမယ် ၊ ရေနဲ့ ဆေးပစ်တာမျိုးက အသင့်တော်ဆုံးပါ။
5. ကြီးထွားဆေးတွေ မသုံးပါနှင့်
အမျိုးသမီးတွေကို စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရ သဘာဝထက်လွန်ကဲနေတဲ့ အတိုင်းအတာကို မနှစ်သက်ကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ ကြီးထွားစေတဲ့ ဆေးတွေကို သင့်အနေနဲ့ သုံးစွဲဖို့ မလိုပါဘူး ၊ ဒါတွေက သင့်ကို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
6. သန့်စင်ဆေးရည်တွေ မသုံးပါနဲ့
အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ပေးရမှာ မှန်ပေမယ့် ဘာသန့်စင်ဆေး ညာသန့်စင်ဆေး ဆိုတာတွေ မသုံးပါနဲ့ ၊ ရေနဲ့သာ ဆေးကြောသန့်စင်ပေးပါ။ သန့်စင်ဆေးတွေမှာက ဓါတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
7. အလွန်အကျွံ ဆေးကြောခြင်း
သန့်ရှင်းတာ ကောင်းပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့်လည်း အလွန်အကျံ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။
8. မှန်ကန်တဲ့ အတွင်းခံကို ရွေးချယ်သုံးစွဲပါ
သင့်အဂါင်္ကို ထိခိုက်နာကျင်စေမယ့် ၊ တင်းကျပ်နေတဲ့ အတွင်းခံမျိုး မသုံးပါနဲ့ ၊ သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းစေနိုငတဲ့ သက်သောင့်သက်သာ အတွင်းခံမျိုးကို ရွေးချယ်သုံးစွဲပါ
9. ဂေါ်လီ ၊ ဆေးမင်ကြောင် ထိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့
ဂေါ်လီထည့်တာတို့ ၊ ဆေးမင်ကြောင်ထိုးတာတို့ ဘယ်တော့မှ မလုပ်ပါနဲ့ ၊ ဒါတွေက သင့်ကို လိင်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ရောဂါတွေ အလွယ်တကူရစေနိုင်ပါတယ်။
ကြီးချင်လို့ ဆိုပြီး ဆေးမသောက်ဖို့ ပြောခဲ့သလို ၊ အဂါင်္ကို ဆွဲဆန့်ခြင်း ၊ စုပ်တဲ့ကိ၇ိယာတွေ အသုံးပြုခြင်းမျိုးကိုလည်း ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။
1. ထောငျနခြေိနျမှာ မခြိုးပါနဲ့
သငျ့အဂါင်ျ မာကွောထောငျမတျနခြေိနျမှာ ငွိမျသှားစခေငျြလို့ဆိုပွီး ခြိုးတာမြိုး မလုပျမိပါစနေဲ့ ၊ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ သငျခြိုးတာဟာ ၃၀ ဒီဂရီထကျ ပိုသှားခဲ့ရငျ အဂါင်ျကြိုးသှားနိုငျတဲ့ အခွအေနပေါ။
သငျ့အဂါင်ျရဲ. အရပွေားတှဟော ထိလှယျရှလှယျပါ ၊ ဒါကို ကိုကျတာမြိုး လုပျမယျဆိုရငျတော့ ဒုက်ခရောကျနိုငျပါတယျ ၊ အရပွေား ပေါကျပွဲတာမြိုး ၊ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
3. ရိုကျနှကျခွငျးမြိုး မလုပျပါနှငျ့
ဘာအကွောငျးနဲ့မှ ဒီနရောကို ထိုးတာကနျကွောကျတာ ရိုကျနှကျတာမြိုး မလုပျပါနဲ့ ၊ အခနျ့မသငျ့ရငျ သသေညျထိ ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။
4. သနျ့ရှငျးရေး လုပျပေးပါ
ခဈြတငျးနှောပွီးရငျဖွဈစေ ၊ တဈကိုယျရအောသာဖွပွေီးရငျဖွဈစေ သနျ့ရှငျးရေး ပွုလုပျပေးရပါမယျ ၊ ရနေဲ့ ဆေးပဈတာမြိုးက အသငျ့တျောဆုံးပါ။
5. ကွီးထှားဆေးတှေ မသုံးပါနှငျ့
အမြိုးသမီးတှကေို စဈတမျးကောကျယူမှုအရ သဘာဝထကျလှနျကဲနတေဲ့ အတိုငျးအတာကို မနှဈသကျကွဘူးလို့ ဆိုပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့မို့ ကွီးထှားစတေဲ့ ဆေးတှကေို သငျ့အနနေဲ့ သုံးစှဲဖို့ မလိုပါဘူး ၊ ဒါတှကေ သငျ့ကို ဘေးထှကျဆိုးကြိုးသာ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
6. သနျ့စငျဆေးရညျတှေ မသုံးပါနဲ့
အပျေါမှာပွောခဲ့သလို သနျ့ရှငျးရေး ပွုလုပျပေးရမှာ မှနျပမေယျ့ ဘာသနျ့စငျဆေး ညာသနျ့စငျဆေး ဆိုတာတှေ မသုံးပါနဲ့ ၊ ရနေဲ့သာ ဆေးကွောသနျ့စငျပေးပါ။ သနျ့စငျဆေးတှမှောက ဓါတုပစ်စညျးတှေ ပါဝငျနပေါတယျ။
7. အလှနျအကြှံ ဆေးကွောခွငျး
သနျ့ရှငျးတာ ကောငျးပါတယျ ၊ ဒါပမေယျ့လညျး အလှနျအကြံ သနျ့ရှငျးရေး လုပျပေးဖို့ မလိုအပျပါဘူး။
8. မှနျကနျတဲ့ အတှငျးခံကို ရှေးခယျြသုံးစှဲပါ
သငျ့အဂါင်ျကို ထိခိုကျနာကငျြစမေယျ့ ၊ တငျးကပျြနတေဲ့ အတှငျးခံမြိုး မသုံးပါနဲ့ ၊ သှေးလညျပတျမှု ကောငျးစနျေိုငတဲ့ သကျသောငျ့သကျသာ အတှငျးခံမြိုးကို ရှေးခယျြသုံးစှဲပါ
9. ဂျေါလီ ၊ ဆေးမငျကွောငျ ထိုးတာမြိုးမလုပျပါနဲ့
ဂျေါလီထညျ့တာတို့ ၊ ဆေးမငျကွောငျထိုးတာတို့ ဘယျတော့မှ မလုပျပါနဲ့ ၊ ဒါတှကေ သငျ့ကို လိငျနဲ့ ပတျသတျတဲ့ ရောဂါတှေ အလှယျတကူရစနေိုငျပါတယျ။
ကွီးခငျြလို့ ဆိုပွီး ဆေးမသောကျဖို့ ပွောခဲ့သလို ၊ အဂါင်ျကို ဆှဲဆနျ့ခွငျး ၊ စုပျတဲ့ကိ၇ိယာတှေ အသုံးပွုခွငျးမြိုးကိုလညျး ရှောငျကဉျြသငျ့ပါတယျ။